Yekutanga kutumirwa kweiyo nyowani Apple TV 4K uye Apple Watch Series 3 kutanga | Ndinobva mac
Zviripachena zvakare zvemhando nyowani dze iPhone 8 uye iPhone 8 Plus iyo yekutanga vashandisi yakachengeterwa Chishanu chapfuura. Zvese zvigadzirwa izvo Apple yakawedzera mune chigadzirwa katarogu kunze kweiyo nyowani iPhone X, ivo vatanga kugoverwa kumakambani ekuendesa senge UPS.
Izvi zvinoreva kuti vamwe vashandisi vakaraira zuva rimwe chetero vanogona kutogamuchira zvigadzirwa zvishoma pamberi paSeptember 22, iro zuva ravanotarisirwa kutanga kugamuchira. Kune rimwe divi ndizvo chimwe chinhu chinowanzoitika kuti maodha anogamuchirwa mazuva mashoma pamberi pekutarisirwa, asi hazviitike mune zvese zviitiko futi.
Mazhinji edivice anotumirwa anobva kuShanghai, saka zvine musoro kuti vanogona kunonoka mazuva ekutakurwa kusvika musi weChishanu mumwechete wakarongwa. Izvo zviri pachena ndezvekuti avo vakatenga iyo nyowani Apple TV 4K, Apple Watch Series 3 kana iPhone 8 Zvekare vane vhiki pamberi pekushanya kwakawanda kumapeji akakandwa.
Kana iwe uri mumwe wevashandisi vekutanga vakatenga chigadzirwa muApple online chitoro yako "yekutevera nhamba" inogona kunge iri mune inotevera nhanho izvozvi, saka inzwa wakasununguka kutarisa uye nekugovana nesu zuva rekufungidzirwa rekuendesa uye nezvawakatenga. Ndinovimba svondo rino rinopfuura nekukurumidza sezvinobvira kune vese vane rombo vatengi uye kunyanya kana zvichikwanisika kuti ichasvika zvishoma pasati ratarwa zuva rekutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Yekutanga kutumirwa yeApple TV 4K uye Apple Watch Series 3 inotanga